Kutheni kubaluleke kakhulu ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo | Bezzia
UToñy Torres | 14/05/2022 18:00 | Ukuzivocavoca
Kuyaziwa ukuba kubaluleke kakhulu ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo, kodwa ukunyaniseka, ngaba uhlala uyenza ngaphandle kokukhetha? Ukuba uqhuba imidlalo rhoqo, kunokwenzeka ukuba zombini ukuzolula kunye nokufudumala kuyingxenye yoqeqesho lwakho. Kodwa, kwabo baqalayo okanye amavila, kwiimeko ezininzi zizinto ezidlulayo.
Mhlawumbi ngenxa yobuvila, okukhona uthatha ixesha elide ukuqalisa, kokukhona kuya kuba nzima kakhulu ukuhambisa umzimba wakho, yiloo nto abantu abaninzi abayithethayo kubo. ziqinisekise ukuba awudingi kufudumeza okanye ukuzolula. Abanye banikezela ngenxa yokungabikho kwexesha, nangona ukuba uyenza kakuhle, zombini kufuneka zidibaniswe kwixesha lokuzilolonga. Nokuba kusenokuba njalo, inyaniso ikukuba ngamanyathelo amabini asisiseko okuphepha ukungonwabi.
1 Ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo, izizathu ezinyanzelisayo
1.1 Kwakhona njengamalungiselelo engqondo
Ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo, izizathu ezinyanzelisayo
Nokuba ucwangcisa umthambo olula, nokuba awuzukwenza ngaphezulu kwento encinci yokukhwela ibhayisekile ekhaya. Ukufudumala kunye nokuzolula zi amanyathelo umzimba kufuneka ulungise izihlunu zakho. Ngaloo nto, ukulimala okunokuphela ngendlela enzulu kakhulu okanye engapheliyo, njenge-sprains, iinyembezi okanye i-strains, iyathintelwa. Kodwa kwakhona ngenxa yokuba ngokwandisa ukunyakaza kwakho kuba banzi, amajoyina alungiselelwe ngakumbi kwaye akuvumela ukuba wenze uqeqesho olusebenzayo nolupheleleyo.
Ezi zizathu kumgangatho womzimba, kodwa akuzona zodwa, ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo linyathelo lokuqala elisisiseko, kuba bancedisa ukwandisa izinga lokuphefumula kunye nentliziyo. Oko kukuthi, umzimba wakho wonke uzilungiselele ngcono ukwenza ezemidlalo. Ngenxa yokuba umthambo ubalulekile kwimpilo entle, kanye njengokuba kunjalo ukwenza ngokuchanekileyo, ngaphandle kokukhetha.
Ukongeza kwezi zizathu, fudumala kwaye wolule xa usenza imidlalo La ngamanyathelo ayimfuneko ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
Xa ufudumeza: Yandisa ubushushu bomzimba kwaye iphucula amandla emisipha. Uya kukwazi ukwenza uqeqesho olusebenzayo ngakumbi.
Kwakhona phucula ukuguquguquka kwakho.
Izihlunu eziphambili zomzimba ezibandakanyekayo kuqeqesho olusisiseko ufumane ioksijini eninzi ngokufudumeza kwangaphambili.
Kuyanceda nawe vula imithambo yegazi.
Linyathelo elibalulekileyo le ukuthintela ukwenzakala ngezihlunu.
Kwa kunjalo, ikunceda ulungiselele ngokwasengqondweniKuba ngaphambi kokuba uqale uqeqesho, umzimba wakho uqala ukukhulula i-endorphins ekwenza uzive ukhuthazwa ngakumbi ukuba wenze umthambo.
Kwelinye icala, ngokuzolula ufumana amathambo, amalungu kunye nezihlunu zilungiswe ngcono ukuzinikela ngexesha loqeqesho.
Baphucula ukuguquguquka phakathi kwabanye, ukusebenza, ukujikeleza kwegazi kunye nokuphumla kwemisipha.
Kwakhona njengamalungiselelo engqondo
Ngexesha lemizuzu echithwe ukufudumala kunye nokuzolula ngaphambi kokuba wenze umthambo, ingqondo yakho igxininiswe kuwo onke amanqanaba ukuze uzilolonge ngokwenene. ekufudumaleni umzimba uqala ukukhulula endorphins oko kukwenza uzive uphila kwaye ukhuthazekile, umzimba wakho kunye nengqondo yakho zilungelelaniswe ukunika okona kulungileyo. Kodwa kwakhona, ngexesha lokusolula ufikelela kwinqanaba eliphezulu lokugxila.
Loo mizuzu xa ugxile kakhulu ekoluleni, ukuva ukuba umzimba wakho wolula njani ukukunceda wenze umthambo, Lixesha elisemgangathweni apho ukwaziyo ukuhambelana nesiqu sakho somzimba. Elo xesha kufuneka wazi ngokupheleleyo, ube nombono wemisipha yakho kunye namalungu azolula. Lixesha elibaluleke kakhulu phambi kokuzivocavoca ngokomzimba nangokwengqondo.
Ngoku ukuba uyazazi izizathu zokuba kutheni kubaluleke kakhulu ukufudumala kwaye uzolule xa usenza imidlalo, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukwazi ezinye iimvavanyo onokubandakanya ezi ndlela zoqeqesho kuqeqesho lwakho. E-Bezzia kunyeUya kufumana zonke iintlobo zomthambo wokuzifudumezar, njengokuba ezi ngcamango ze wolula yabo bonke. Kuya kuthatha imizuzu embalwa kuphela, kodwa uya kuqaphela ngokukhawuleza imiphumo emihle yokufudumala kunye nokwelula ngaphambi kokuba usebenzise. Kwaye khumbula, ukolula imizuzu embalwa ekupheleni komsebenzi kuvumela izihlunu zakho ukuba ziphumle emva komzamo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukuzivocavoca » Kutheni kubaluleke kakhulu ukufudumala kunye nokwelula xa usenza imidlalo?
Iindlela zokulungisa intwasahlobo/ehlotyeni ngo-2022